Isimo Sokumaketha Okuqukethwe 2014 | Martech Zone
Isimo Sokumaketha Okuqukethwe 2014
NgoLwesithathu, Februwari 19, 2014 NgoLwesithathu, Februwari 19, 2014 Douglas Karr
Wake wazibuza ukuthi yini abanye abathengisi bedijithali abafezayo uma kukhulunywa ngamasu wokumaketha okuqukethwe, kufaka phakathi ukubhuloga, ukukhiqiza, ukwabelana, nokukala? Kanye I-LookBook HQ, U-Oracle Eloqua ukhombisile ukuthi abathengisi bedijithali baphendula kanjani ezimfunweni zamasu wokuqukethwe kule infographic.
Sifuna ukumaketha ukumaketha kokuqukethwe ngokuqonda okucacile ngamasu abezindaba atholakele, aphethwe, futhi akhokhelwayo— yiziphi izinqubomgomo abathengisi abazilandelayo — kanye nokuthi okuqukethwe kubalazwe kanjani ohambweni lomthengi, namamethrikhi wokusebenza abalulekile abalulekile.
Kugcwele Umbiko wokuma kokumaketha kokuqukethwe kufaka izimpendulo ezivela kubakhangisi abangaphezu kuka-200 emibuzweni efana nale:
Yiziphi izinhlobo zokuqukethwe ezenziwa ngabakhangisi besimanje, kanjani njalo futhi ngasiphi izinhloso.
Abathengisi besimanje bakusebenzisa kanjani okuqukethwe kwabanye abantu.
Ziyini izinselelo ezibalulekile ezibhekene nokukhangisa kokuqukethwe kwanamuhla.
Ngabe abathengisi banamuhla baqondanisa kahle kangakanani okuqukethwe nohambo lomthengi.
Yimaphi amamethrikhi wabathengisi besimanje abamba nokuthi bakubheka kanjani ukusebenza kokukhangisa kokuqukethwe.
Amathrendi amakhulu athinta imisebenzi yokuthengisa okuqukethwe.
Tags: 2014ibhulogiumbiko wokuthengisa wokuqukethweukukhiqizwa kokuqukethweamasu wokuqukethweukubhuloga ezinkampanieloquainfographicincwadi yokubheka hqinhlolovo yezokumakethaOraclei-oracle eloquaisimo sokuqukethwe kokumaketha